Marxalad kale oo muhiim ah oo ku taal Wadada 'South Belt South' ayaa la soo gabagabeynayaa RayHaber | raillynews
HomeGUUDMarxaladda muhiimka ah ee wadada Malatya South Belt Road waa in la dhameeyaa
21 / 07 / 2018 GUUD, WADADA, TURKEY
Degmada Malatya, oo sii wado hawsheeda kuyaal Koonfurta Belt Road, oo muhiimad weyn u leh Malatya, ayaa dhisay dhagax dhagxaanta Kernek Waterfall iyadoo hoos u dhigtay farqiga sareeya ee Kernek - Beydağı ee xariiqa 11.5 ee mitirka 2. Qeybta mitirka 50 ee kanaalka biyaha uruurinta, taas oo u qaybisa wadada u furan dhererka mitirka 100, waa la xiray.
Macluumaadka ku saabsan shaqada ee ku aaddan Duqa Magaalada Koonfurta Belga Haci Ugur Polat, oo ka soo baxa goobta baadhitaanka. Duqa magaalada Polat waxaa weheliya gudoomiye kuxigeenka Sinan Cheçen, ku xigeenka xoghayaha guud ee degmada caasimadda, Remzi Akdemir oo ka tirsan degmada Fırat, Mesut Turkoglu, duqa magaalada Kernek, Hanifi Akdağ oo ka tirsan Yamaç Deegaanka, Hakverdi Sevgi oo ka tirsan Degmada Beydağı iyo Özkan Oyan, Duqa Degmada Beydağı.
Wadada Koonfureed waa in lagu dhammeeyaa Gaadiidka Gaadiidka Magaalada
Duqa Magaalada Metropolitan Hacı Uğur Polat, oo tilmaamay in loo baahan yahay in la dhammeeyo Koofurta Jiilka si loo yareeyo gaadiidka magaalada dhexdeeda, ayaa sheegay in ay isku dayeen in ay ka gudbaan dhibaatooyinka hortooda si ay u furaan wadada.
Duqa magaalada Koonfurta Koofurta Beledika, Beytakut, Yamaç iyo Kernek. Gobollada kale ayaa loo furay gaadiidka. Marka ay si buuxda u furan tahay, waxay bilaabi doontaa isgoysyada qulqulka hawada waxayna ka gudubtaa Turgut Ozal, Cilesiz, Cemal Gürsel, Beydağı, Kernek, Yamaç, xaafadaha Eryat iyo Cönnuk iyo dib ugu soo noqnoqoshada iskuxireenka. Qeybta Kernek - Beydağı, waxaan u qaadeynaa farqiga u dhexeeya mitirka 8 oo wuxuu daboolayaa qaybta mitirka 2 ee kan biyaha la ururiyo. Daraasadaha gobalkaan ayaa gaaray heerkii ugu danbeeyay. Ka shaqeynta gobolada kale waxay sii wadi doonaan isbeddelka magaalada. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo ka qayb qaatay shaqadan. "
Marxaladda Labaad ee Dhamaystiraysa Gaza Gaza
Dhismaha Nissibi Bridge
Wadada Pristina-Skopje si aad u dhameysato
Bursan diyaarinta mashruuca wadooyinka tareenka ah si loo dhammaystiro
Shaqadu waxay sii socotaa waddada Malatya Northern Belt Road
'Hal Qarniyaal Hal Waddo' oo looga doodi doono Istanbul
Qeybta Kaynarca Melekbaba ee waddada Malatya Northern Belt Road ayaa loo adeegaa
Meydan-EXPO shaqada mashruuca tareenada mashruuca ayaa ku saabsan in la dhammeeyo
Degmada Magaalooyinka Malatya